प्रियंकासँग सेल्फी लिने पुष्पलको रहर होला त पूरा ? - Glamorous Icon
Home›GIcon News›प्रियंकासँग सेल्फी लिने पुष्पलको रहर होला त पूरा ?
अभिनेता पुष्पल खड्का यतिबेला डेब्यु सिनेमा ‘दर्पण छायाँ–२’ को प्रमोशनमा व्यस्त छन् । प्रमोशनकै क्रममा हामीकहाँ आइपुगेका उनले सिनेमा भन्दा बाहिरका केही कुराहरु सेयर गरेका छन् । जसमध्ये चाखलाग्दो कुरा थियो सेल्फी । पुष्पलले कुराकानीका क्रममा एकपटक एक जना फ्यानले सेल्फीकै लागि एक घण्टा कुरेको बताए । आफूलाई सेल्फीमा खासै रुची नभएको भन्दै उनले ती फ्यानलाई सम्झँदै भने, ‘एक पटक म छायांकनमा थिएँ । अनि त्यहाँ एकजना फ्यान आउनु भयो सेल्फी लिनको लागि । उहाँले सेल्फी लिनै लाग्दा मेरो फ्रेम तयार भयो र म छायांकनमा गएँ । मेरो छायांकन झण्डै एक घण्टा जति लागेको थियो । तर उहाँ भने मसँग सेल्फी लिनकै लागि कुरेर बस्नु भएको रहेछ । पछि मैलै पनि उहाँलाई दर्जन बढी सेल्फी खिच्ने समय दिएको थिएँ जुन म कहिल्यै पनि बिर्सन सक्दिन ।’
जुनसुकै बेला पनि सेल्फी लिईरहनेहरुका लागि के भन्नुहुन्छ तपाईँ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘म उहाँहरुलाई केही पनि भन्न चाहन्न । किनकी सबैको आ–आफ्नै जीवनशैली हुन्छ । रुची हुन्छ । चाहना हुन्छ । मानिसहरुले आफ्नो जीवनलाई कसरी इन्टरटेन गर्छ भन्ने कुरा हो । एक्लोपनामा कसरी बहलाउँछ भन्ने कुरा हुन्छ । तर कामलाई नै बिगार्ने गरी सेल्फीको लत लगाउनु भनेको चाहि राम्रो होईन । जस्तो की मेरो बहिनीले पनि एकातिर नेट चलाईराको हुन्छ । सेल्फी लिईराको हुन्छ । यहि क्रममा कहिले तरकारी डढाउँछे अनि कहिले नुन धेरै भएको हुन्छ । । यस्तो चाहिँ नगर्नुहोस् भन्छु म ।’
त्यस्तै पुष्पलले कुराकानीका क्रममा आफूलाई अभिनेत्री प्रियंका चोपडासँग सेल्फी लिन मन लागेको पनि बताए । प्रियंकाको बोली उनलाई खुबै मन पर्छ । अभिनयका बारेमा भने उनी भन्छन्, ‘ठिकठिकै छ ।’